ဉာဏ်စမ်း Crack Explorer – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ဉာဏ်စမ်း Crack Explorer – လှိုင်သာယာ&Hack
အားဖြင့် အက်မင် | နိုဝင်ဘာ 26, 2021
မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကို အလှည့်ကျတဲ့အထိ မစောင့်ဘဲ ကစားချင်လား။? ဤသည်မှာ တစ်ယောက်တည်း ခံစားရမည့် Trivia Crack အတွေ့အကြုံအသစ်ဖြစ်သည်။. အသေးအဖွဲ ကုသိုလ်အားလုံး, မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှ မရှိဘဲ.
Milly သည် မြေတပြင်လုံးတွင် မကောင်းမှုများကို ကြဲနေပြီး Willy သည် သူ့သူငယ်ချင်းများကို ကယ်တင်ရန် သင့်အကူအညီ လိုအပ်နေသည်။. အဆင့်များကိုကျော်လွှားပြီး မြေပုံအသစ်များကိုရှာဖွေရန် မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပါ။. လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သင်သည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုတွေ့နိုင်ပြီး မယုံနိုင်စရာဇာတ်ကောင်များနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။.
• အနိုင်ရရန် မေးခွန်းစဥ်များကို အပြီးသတ်ပါ။
• သင်အကြိုက်ဆုံးအသေးအဖွဲအကြောင်းအရာများကို ရွေးပါ။
• Willy ၏သူငယ်ချင်းများကိုကယ်တင်ပါ။
• ဘောနပ်စ်အဆင့်ဖြင့် အကောင်းဆုံးဆုများကို ရယူပါ။
• Temple Trial တွင် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ကို ရှာဖွေပါ။
• Compete against the အသိုင်းအဝိုင်း in the League Ranking
• အခမဲ့ရင်ဘတ်ကို နေ့စဉ်တောင်းဆိုပါ။
• စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ မြေပုံအသစ်များမှတစ်ဆင့် သင့်လမ်းကို လျှောက်ပါ။
• သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များအကြောင်း ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Temple Trial သည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများနှင့် ပြည့်နေသည်။. သင်မှာ .... ရှိသည်6မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ ကြိုးစားတယ်။, ကုဒ်ကို decipher လုပ်ပြီး ရတနာကို ရယူလိုက်ပါ။.
အပတ်တိုင်း လိဂ်တစ်ခုစီ၏ ထိပ်တန်းသို့ တက်လှမ်းပြီး အကောင်းဆုံးဆုများရယူရန်နှင့် အကောင်းဆုံးများကြားတွင် ယှဉ်ပြိုင်ရန်. ဆုဖလားများသည် အောင်ပွဲအတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။, မြေပုံများကို ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် မှန်ကန်စွာ ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ရယူပါ။.
မီလီကို ရပ်တန့်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြန်ယူနိုင်ပါ့မလား? သိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်။.
သံသယတွေ, ပြဿနာများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များ? support.etermax.com တွင်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှာပါ။
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, Crack, Explorer, Trivia
← သင်၏ Monster ကိုကြီးထွားစေပါ။ – လှိုင်သာယာ&Hack အဖေ့အိမ် – လှိုင်သာယာ&Hack →
Bubble Breaker-အနိုင်ရရန်ရည်ရွယ်ချက် – လှိုင်သာယာ&Hack
Poppy Play ဂိမ်း : ကစားချိန် Huggy Wuggy Cheats&Hack
မြွေညံ့: Cheats ကို သင်ကူညီနိုင်မလား။&Hack
စက်ဝိုင်းအပန်းဖြေ: နေ့စဉ်အနုပညာ ပဟေဋ္ဌိ လှည့်ကွက်များ&Hack
Poppy ကစားချိန် Huggy Wuggy – လှိုင်သာယာ&Hack
Deck Dungeon တစ်ခု – လှိုင်သာယာ&Hack
စားပွဲတင်တင်းနစ်တိုက်ပွဲ – လှိုင်သာယာ&Hack
နှင်းပြိုင်ပွဲ: ဆောင်းရာသီ Aqua Park လှည့်ကွက်များ&Hack
Stickman Escape: ရွေးချယ်မှုဇာတ်လမ်း – လှိုင်သာယာ&Hack
Overdrive 2.6 Digital Dream Labs Cheats မှ ပြန်လည်စတင်သည်။&Hack